FASIRAADA QAAR KAMID AH RIYOOYINKA | Hargeysa World~Herald
FASIRAADA QAAR KAMID AH RIYOOYINKA
UncategorizedFASIRAADA QAAR KAMID AH RIYOOYINKA
1- Haddii aad ku riyooto adigoo dhimanaaya ama dhintay , ogow in cimrigaagu dheeraan doono.
2- Haddii aad ku riyooto adigoo cunaya malab cad, waxay caddeyn u tahay inaad ka caafimaadi doonto xanuun aad qabtay.
3- Haddii aad ku riyooto adigoo qof ka cararaaya, ogow inuu jiro qof kaa maseyrsan ama raba inuu ku hagardaamiyo.
4- Haddii aad soo toosto adigoo weli riyadii xalay xusuusan ama aad maalintoo dhan riyadii xusuusan tahay, waxay caddeynaysaa in riyadaasi aysan aheyn riyo caadi ah ee ay tahay fariin adiga kugu socota.
5- Adigoo faras saaran haddii aad ku riyootid waxay caddeynaysaa inaad Hanti badan heli doontid, ama aad safar geli doontid.
6- Haddii aad ku riyooto adigoo duulaya, waxay caddeynaysaa inaad dhibaatooyin ku haysta ay kaa fududaan doonaan، ama waxay noqon kartaa inaad hoggaan iyo mas’uuliyad qaadi doonto.
7- Haddii aad ku riyooto mas ogow inuu jiro qof raba inuu dhibaato ku gaarsiiyo.
8- Haddii aad ku riyooto qof aad taqaano oo dhintay, waxay caddeynsaa inaad qofkaas is khilaafi doontaan ama aad kala fogaan doontaan.
9-Haddii aad ku riyooto abeeso, dib qalooc, Ey, Doofaar, Daanyeer, Musqul, Nijaaso, badanaa waxay sheegaan in qofka la sixray.
~Mustaf Awil Hassan